Suuqa Kala Iibsiga Maanta: Manchester United Oo Xiiseeneysa Declan Rice, Marco Asensio Oo Ku Biiray Liiska Liverpool, Sheekada Karim Adeyemi Iyo Qodobo Kale
[ September 26, 2021 ] Chelsea oo weli xiiseyneysa saxiixa Federico Chiesa	Wararka Ciyaaraha
HomeWararka CiyaarahaSuuqa kala iibsiga Maanta: Manchester United oo Xiiseeneysa Declan Rice, Marco Asensio oo ku biiray Liiska Liverpool, Sheekada Karim Adeyemi iyo Qodobo kale
September 7, 2021 Wararka Ciyaaraha, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
Manchester United ayaa wali xiisaynaysa 22 sano jirka khadka dhexe ee kooxda West Ham United iyo xulka England ee Declan Rice walow aysan saxeexiisa u dhaqaaqin xagaagan. (ESPN)
Liverpool ayaa baadhitaan ku wada suurogalnimada ay ugu dhaqaaqayso xiddiga Valencia ee Carlos Soler kaas oo heshiiskiisa 125 Milyan oo pound lagu jabin karo, Klopp ayaa u doonaya Soler bedelka Gini Wijnaldum oo PSG kaga biiray. (Fichajes – in Spanish)
Liverpool ayaa sidoo kale xiisaynaysa 25 sano jirka Real Madrid ee Marco Asensio kaas oo isku diyaarinaya inuu kooxdaas ka tago si uu dib ugu nooleeyo waayihiisa ciyaareed. (Todofichajes – in Spanish)
Liverpool, Barcelona iyo Bayern Munich ayaa dhammaantood xiisaynaya weeraryahanka RB Salzburg ee Karim Adeyemi kaas oo ah 19 sano jir xulka Germany kulankii ugu horreeyay ee uu u ciyaaray Axadii gool u dhaliyay. (Bild – in German)
Wakiilka khadka dhexe ee Manchester United ee Donny Van De Beek ayaa wadahadalo ciyaaryahankaas ku saabsan la yeeshay Everton xagaagan. (Express)
Si kastaba Van De Beek ayaa sheegay in tababare Ole Gunnar Solskjaer uu doonayay inuu isaga kooxda kusii haysto kaddib wadahadalo ay yeesheen. (Vibe with Five)
PSG ayaa dareenkeeda u jeedisay xiddiga AC Milan ee Franck Kessie maadaama oo ay aaminsan yihiin in Paul Pogba uu Man United ka tirsani uu doorbidi doono inuu Real Madrid u wareego. (Defensa Central – in Spanish)
Tottenham ayaa sidoo kale xiisaynaysa Franck Kessie isla markaana u diyaar ah inay marka hore dirto khadkeeda dhexe ee Tanguy Ndombele. (Express)
Neymar ayaa bishii £465,000 oo sababo anshax ah ka qaata PSG xilli ay 419 Milyan oo pound ku bixisay kooxdaasi tan iyo markii uu kusoo biiray 2017.(Mundo Deportivo via Express)
Inter Milan ayaa ka shaqaynaysa heshiis kordhinta Lautaro Martinez iyo Nicolo Barella,. (Fabrizio Romano)
Aaron Ramsey ayaa diiday dalabaad badan oo uu kaga tagi karayay Juventus xagaagii waxaana ka go’an inuu boos joogto ah ku yeesho shaxda tababare Massimiliano Allegri. (Calciomercato – in Italian)
Phil Foden oo 21 sano jir ah ayay Manchester City heshiis cusub oo lix sano ah ka saxeexanaysaa xilli ay saddex sano ka hadheen heshiiskiisa haatan ee kooxda. (Manchester Evening News)
Atletico Madrid ayaa u dhaqaaqi doonta goolhayaha Aston Villa ee Emiliano Martinez haddiiba uu Jan Oblak kooxdeeda ka tago xagaaga dambe. (La Razon – in Spanish)
Antoine Griezmann ayaa sameeyay mushahar dhimis 40% ah sameeyay si uu Atletico Madrid ugu laabto xagaagan. (Goal)
Manchester City iyo PSG ayaa ah labada kooxood ee isha ku haya daafaca bidix ee AC Milan ee Theo Hernandez. (Calciomercato – in Italian)
Inter Milan ayaa xiisaynaysa inay 27 sano jirka khadka dhexe ee Corentin Tolisso qaab bilaash ah kula saxeexato marka heshiiskiisa Bayern Munich dhaco xagaaga. (Tuttosport via Sempre Inter)
Daniel Sturridge ayaa gool ka dhaliyay kulan uu u ciyaarayay kooxda Mallorca oo tijaabo ahaa xilli uu koox cusub raadinayo tan iyo markii uu ka tagay kooxda Trabzonspor March 2020. (Mirror)
Khadka dhexe ee ree France ee Aliou Traore ayaa ku biiraya kooxda Parma kaddib markii ay sii daysay Manchester United. (Fabrizio Romano)
Natiijo: Chelsea 0-1 Manchester City, G. Jesus oo city iyo Guardiola u horseeday guul muhiim ah